အန်ဒါမန်ဟီးရိုး: April 2009
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၃၀ ရက် ၂၀၀၉ )
* ၀က်‌တုပ်‌‌ကွေးရောဂါအဆင့်မြှင့်သတိ‌ပေး [Click]
* အင်အယ်လ်ဒီပြုသာပြင်သာမူဝါဒကိုင်စွဲတောင်းဆိုချက်များလိုက်လျောပါကရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန်ရည်ရွယ် [Click]
* အုန်းဖျန်စခန်းကိုဒီကေဘီအေ၀င်စီးမည့်သတင်းကြောင့်ဒုက္ခသည်များပုန်းခိုကျင်းတူးနေကြ [Click]
* ၀က်တုပ်ကွေးကာကွယ်ရန်၊ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင်စစ်ဆေး [Click]
* ဝက်တုပ်ကွေးအဆင့် ၅ အထိရောက်ပြီ [Click]
* လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်အပေါ်ငါးလုပ်ငန်းကပိတ်ပင် [Click]
* ရနောင်းရှိမြန်မာလိင်အလုပ်သမများဖမ်းဆီးခံရ [Click]
* Burma Named Worst Online Oppressor [Click]
* ADB Triples Capital to Respond to Economic Crisis [Click]
* Thai Ex-Diplomat Says He Urged Ban on Burma’s Asean Membership [Click]
* US Praises Asean, UN for Facilitating Cyclone Nargis Aid [Click]
* US Will Not Lift Sanctions on Burma [Click]
* Burmese Women Arrested in Prostitution Raid [Click]
* Thousands of cyclone victims still need housing [Click]
* Cyclone survivors left to their own devices [Click]
* Burmese refugee children donate money for Nargis victims [Click]
Posted by Andaman Hero at 2:02 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၂၉ ရက် ၂၀၀၉ )
* ဒီမိုကရေစီမဆန်တဲ့အချက်တွေကိုပြုပြင်ပေးလျှင် NLD ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့စဉ်စားမည် [Click]
* ၀က်တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးဖော်စပ်နိုင်ရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေကြိုးပမ်း [Click]
* ၀က်တုပ်ကွေးဖြစ်သူဦးရေအမေရိကန်မှာတိုးလာ [Click]
* ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးစခန်းရန်သူ့လက်ကျ [Click]
* ၀က်တုပ်ကွေးကြောင့်အမေရိကန်မှာကလေးငယ်တဦးသေဆုံး [Click]
* တွံတေးတွင်ဝက်များအစုလိုက်သေဆုံးနေ [Click]
* အပစ်ရပ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များနှင့်ဗိုလ်ချုပ်ရဲမြင့်တွေ့ဆုံ [Click]
* အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စဆွေးနွေး [Click]
* ရှမ်းစော်ဘွားများအာဏာစွန့်ပြီးနှစ်ပေါင်း ၅၀ အကြာ [Click]
* နာဂစ်သင့်ဒေသကျောင်းများဆောက်လုပ်ရေးသဘောကွဲလွဲ [Click]
* ကလေးများကနာဂစ်သင့်သူများအတွက်ငွေလှူဒါန်း [Click]
* ဆိုင်ကလုံးဒဏ်ခံလယ်သမားများပိုးမွှားအန္တရာယ်နှင့်ကြုံနေရ [Click]
* တကိုယ်တော်ဆန္ဒပြသည့်ကျူရှင်ဆရာထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်ကျခံရ [Click]
* ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ပွားမှုကာလဝမ်းရောဂါအသွင်ပြောင်း [Click]
* ဘိုကလေးတွင်စပါးပိုးကျ၊နွေစပါးထွက်နှုန်းထက်ဝက်ကျဆင်း [Click]
* နာဂစ်သင့်ဒေသများကန်ရေသုံးမရသောက်သုံးရေအခက်အခဲဖြစ်ဆဲ [Click]
* ဆန်ဈေးနှုန်းတရိပ်ရိပ်မြင့်တက်လာ [Click]
* ကျိုက်မွန်ထိုစေတီပိန္နဲတိုင်တိမ်းညွတ် [Click]
* ဝေါလေခီးစခန်းအားကေအန်ယူလက်လွတ်ဆုံးရှုံး [Click]
* နာဂစ်လေဘေးမှာလူတွေအမြောက်အမြားသေဆုံးဖို့သင့်ပါသလား [Click]
* တောင်းဆိုချက်ရမှ NLD ‌ရွေးကောက်ပွဲဝင်‌မည်‌ [Click]
* ခိုင်းနွားများကိုနယ်မြေခံစစ်တပ်နှင့်ရဲများကသတ်ဖြတ်စားသောက် [Click]
* နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၏ရှေ့ နေလွတ်ရက်စေ့ပြီးပြန်လွတ်လာ [Click]
* နိုင်ငံတကာအရေးယူမှုထိရောက်ကြောင်းအတိုက်အခံများပြောဆို [Click]
အဟောသိကံ၊ခန္တီနဲ့ 
Posted by Andaman Hero at 1:53 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၂၈ ရက် ၂၀၀၉ )
* ၀က်တုပ်ကွေးကူးစက်မှုသတိပေးအဆင့် WHO တိုးမြှင့် [Click]
* ကလေးစစ်သားအသုံးပြုမှုလုံခြုံရေးကောင်စီဆွေးနွေးပွဲမြန်မာပါဝင် [Click]
* အပစ်အခတ်ရပ်အဖွဲ့တွေနဲ့နယ်မြေအလိုက်တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရစီစဉ် [Click]
* ရှီကာဂိုကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားမြန်မာမိသားစုအသိုင်းအ၀ိုင်းများ [Click]
* ကော်လိုရာဒိုကပုလဲရေစင်သင်္ကြန်ပျော်ရွှင်စွာကျင်းပပြီးစီး [Click]
* မန္တလေးရောက်ရှမ်းတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း [Click]
* နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကိုစစ်အစိုးရကဖုံးကွယ်ထား [Click]
Posted by Andaman Hero at 12:34 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၂၇ ရက် ၂၀၀၉ )
သတင်းနှင့်ဓါတ်ပုံ ။ ။ အင်ဒါမန်ဟီးရိုး
* ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာဝက်‌တုပ်‌‌ကွေးကာကွယ်မှုတွေလုပ်နေ [Click]
* တာလီဘန်‌ကို‌အ‌လျှော့‌ပေး‌နေတဲ့ပါကစ်စတန်‌ [Click]
* Swine တုပ်ကွေးအရေးပေါ်သတိပေးချက် WHO နဲ့ အမေရိကန်ကြေညာ [Click]
* ပါကစ္စတန်တပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲကြားတာလီဘန် ၃၀ ခန့်သေဆုံး [Click]
* ထိုင်းစစ်တပ်နှင့်ဒီကေဘီအေရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ် [Click]
* စုံညီအစည်းအဝေးအတွက်အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်များအနှောင့်အယှက်မရှိလာရောက်နိုင် [Click]
* လူရွှင်တော်ဇာဂနာထောင်ပြင်ထုတ်ဆေးစစ်ခွင့်ရ [Click]
* အီးယူကမြန်မာကိုပိတ်ဆို့မှုသက်တမ်းတိုးမည် [Click]
* ယခုနှစ်သင်္ကြန်တွင်စီးပွားရေးဂယက်ထင်ဟပ် [Click]
* တော်လှန်ရေးသမားနဲ့ဓားပြ [Click]
* စိုင်းခမ်းလိတ်အသက် ၆ဝ ပြည့်ပြီ [Click]
* ရခိုင်ရိုးရာကျင်ကိုင်ပွဲဖူးကက်မှာဆင်နွှဲ [Click]
* ၀က်တုပ်ကွေးကြောင့်အထိတ်တလန့်ဖြစ်စရာမလိုအိုဘားမားပြော [Click]
* ပလောင်လက်ဖက်တောင်သူတွေအခက်အခဲဖြစ် [Click]
* H1N1 ဝက်တုတ်ကွေးမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသေး [Click]
* စစ်အစိုးရနှင့်အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ များတွေ့ ဆုံကြမည် [Click]
* မုံရွာတွင်သာမန်ထက်အပူချိန်မြင့်မား [Click]
* ကေအင်ယူကနအဖရဲ့အစိအမံကိုရှုပ်ချ [Click]
* မြန်မာ၊ထိုင်းလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးသဘောတူစာချုပ် [Click]
Posted by Andaman Hero at 6:31 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၂၆ ရက် ၂၀၀၉ )
* ဝက်‌တုပ်‌‌ကွေးရောဂါကမ္ဘာကိုကူးစက်‌နိုင်‌ [Click]
* ဟီလရီကလင်တန်အီရတ်ကိုမကြေညာဘဲရောက် [Click]
* မြောက်ကိုရီးယားနျူကလီးယားစက်ရုံပြန်လည်ပတ် [Click]
* ထိုင်းနိုင်ငံရေးနှင့်မြန်မာ့အတွေး [Click]
* ဝက်‌တုပ်‌‌ကွေးရောဂါတားဆီးဖို့ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတွေဆောင်ရွက် [Click]
* လက်ဘနွန်ကိုဆက်ပြီးထောက်ခံကူညီသွားမည်ဟုကလင်တန်ပြောဆို [Click]
* ၀က်မှာတွေ့တဲ့တုတ်ကွေးဗိုင်းရပ်မျိုးကြောင့်မက်ဆီကိုမှာလူ ၈၁ ဦးသေဆုံး [Click]
* တွံတေးမြို့ တွင်ဝက်များသေဆုံး၊စားသုံးသူများရောဂါဖြစ် [Click]
* မြန်မာများလူကုန်ကူးခံရမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးမည်ဟုမလေးရှားဝန်ကြီးကတိပြု [Click]
Posted by Andaman Hero at 5:17 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၂၅ ရက် ၂၀၀၉ )
* ANC အနိုင်‌ရ‌ပေမဲ့အမတ်‌အများစု‌နေရာ‌တော့မရခဲ့ [Click]
* ဒုက္ခရောက်မြန်မာတွေရောင်းစားမှုမလေးအရာရှိများပါဝင် [Click]
* စီးပွားရေးပြန်ဦးမော့စေဖို့ G7 နိုင်ငံတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည် [Click]
* မြန်မာဒုက္ခသည်လူကုန်ကူးခံရမှုတိုက်ဖျက်ရေးအမေရိကန်တောင်းဆို [Click]
* ပြည်ပမီဒီယာကိုပြောတဲ့အတွက်စက်ရုံအလုပ်သမားများအလုပ်ထုတ်ခံရ [Click]
* စစ်တပ်စခန်းရုံးမီးလောင်မှုအလုပ်သမားတွေမတရားဖမ်းဆီး [Click]
* ANTI-SANCTIONS ဘာလဲ၊ဘယ်လဲ [Click]
* ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရုပ်ရှင်ပွဲတော်၌မြန်မာ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပြမည် [Click]
* မြန်မာ့လက်ဝှေ့သင်တန်းကျောင်းကြီးဖွင့်မည် [Click]
* မြန်မာဒုက္ခသည်များ"ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတွင်ရောင်းစားခံရ" [Click]
* ၁၀၅ မိုင်တွင်ကုန်သွယ်ရေးစည်းမျဉ်းတင်းကျပ်လာ [Click]
* ပျောက်ဆုံးနေသောအန်အယ်ဒီအဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးအင်းစိန်ထောင်တွင်ရောက်ရှိ [Click]
Posted by Andaman Hero at 4:44 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၂၀ ရက် ၂၀၀၉ )
* အီရန်‌အ‌မေရိကန်‌အားစမ်းပွဲ [Click]
* အမေရိကတိုက်နိုင်ငံများလက်တွဲရပ်တည်ရေးသမ္မတအိုဘားမားတိုက်တွန်း [Click]
* မြန်မာ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးမည်အေဒီဘီခန့်မှန်း [Click]
* ဧပြီလစကား-မြန်မာနှစ်ကူးကိုကျော်ဖြတ်ပုံ [Click]
* နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်များအကြုံးဝင်မည့်အစည်းအဝေးအင်အယ်လ်ဒီခေါ်တော့မည် [Click]
* ဝန်ကြီးချုပ်ထိုင်းခရီးစဉ်နောက်ကျပြီးမှဖော်ပြ [Click]
* ရန်ကုန်တွင်ဝမ်းရောဂါကြောင့်လူသေဆုံး [Click]
* ရန်ကုန်သင်္ကြန်ရေမရှိ၍မစည်ကား [Click]
* ကရင်ရွာသားများစားနပ်ရိက္ခာရှားပါးမှုနှင့်ကြုံတွေ့နေရ [Click]
* အစိမ်းနှင့်အစိမ်း-ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုခြိမ်းခြောက်နေ [Click]
* ဗိုလ်ချုပ်မြ(သို့မဟုတ်)စစ်သားစိတ်နှင့်နိုင်ငံရေးလုပ်သူ-အပိုင်း(၃) [Click]
* ကေအင်ယူနှင့်ယာယီအပစ်ရပ်ဟုဒီကေဘီအေပြော [Click]
Posted by Andaman Hero at 1:16 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၁၉ ရက် ၂၀၀၉ )
* ကျူးဘားကိုဒဏ်ခတ်မှုရုပ်သိမ်းရန်အမေရိကနိုင်ငံများတောင်းဆို [Click]
* အ‌မေရိကန်‌သတင်း‌ထောက်‌အီရန်‌မှာ‌ထောင်‌ ၈ နှစ်ကျ [Click]
* ဘီဂျလီမုန်တိုင်းကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၅ ဦးသေဆုံး [Click]
* ဆိုမာလီယာပင်လယ်ဓားပြနောက်ထပ်သင်္ဘောနှစ်စီးပြန်ပေးဆွဲ [Click]
* စိုင်းခမ်းလိတ်၏ ၆၀ ပြည့်မွေးနေ့ရက်ပိုင်းအတွင်းပြုလုပ်ကြမည် [Click]
* မွန်ပြည်သစ်ပါတီခရိုင်ကော်မတီတစ်ဦးလုပ်ကြံခံရ [Click]
* ဗမာစကားမတတ်သည့်ကျေးလက်သျှမ်းပြည်သားများခရီးသွားခက်ခဲ [Click]
* ပါတီလူထုမဲဆွယ်ပွဲမှာပါတီခေါင်းဆောင်ဟောင်းမန်‌ဒဲလားလည်းပါ [Click]
* အမေရိကန်သတင်းထောက်အမှုတရားသဖြင့်စစ်ဆေးဖို့အီရန်သမ္မတတိုက်တွန်း [Click]
* အမေရိကနိုင်ငံများထိပ်သီးညီလာခံသမ္မတအိုဘားမားသံတမန်ရေးအမြတ်ထွက် [Click]
* မုံရွာထောင်ထဲကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ [Click]
* လူတိုင်းအတွက်အခမဲ့ပညာရေး [Click]
Posted by Andaman Hero at 3:34 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၁၈ ရက် ၂၀၀၉ )
* ကျူးဘားနဲ့ ဆက်‌ဆံ‌ရေးအသစ်‌‌ပြန်‌စမယ်‌လို့ အိုဘားမား‌ပြော [Click]
* ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတို့၏နှစ်သစ်ကူး [Click]
* သင်္ကြန်ရက်များအတွင်းဦးပိန်တံတားအထူးစည်ကား [Click]
* မြန်မာပြည်ဘီဂျလီဆိုင်ကလုန်းရန်မှလွတ်ပြီ [Click]
* ဘီဂျလီမုန်တိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကိုဝင်တိုက် ၃ ဦးသေဆုံး [Click]
* အမေရိကန်သတင်းထောက်သူလျှိုမှုနဲ့ အီရန်ကထောင်ချ [Click]
* ဆိုင်ကလုန်းဘီဂျလီဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတောင်ပိုင်းဝင်မွှေ [Click]
* မြန်မာအနောက်ပိုင်းမုန်တိုင်းကြောင့်ရေကြီးနိုင် NASA သတိပေး [Click]
* ကျူးဘားနဲ့စာမျက်နှာသစ်ဖွင့်နိုင်ရေးအမေရိကန်ကြိုးပမ်း [Click]
* ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ကျော်သူပြည်သူ့ ဘက်သားအနုပညာသမားဆုချီးမြှင့်ခံရ [Click]
* လေတပ်စခန်းတပ်သားများရွာကိုအကြမ်းဖက် [Click]
* PAD တည်ထောင်သူသေနတ်ပစ်ခံရ၊အန္တရာယ် [Click]
* ဦးတေဇ၊အိုင်တီပစ္စည်းစက်ရုံများတည်ဆောက်ရန်ပြင်ဆင် [Click]
Posted by Andaman Hero at 8:05 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၁၇ ရက် ၂၀၀၉ )
* ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာအလုပ်သမားများရိုးရာနှစ်သစ်ကူးပွဲဆင်နွှဲ [Click]
* နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေးနှစ်သစ်ဆုတောင်းပွဲများကျင်းပ [Click]
* ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့ ဖိလစ်ပိုင်သမတတိုက်တွန်း [Click]
* မူးယစ်ဆေးကင်းသောဝဒေသဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောဆို [Click]
* အဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင်နှစ်သစ်ကူးကန်တော့ပွဲပြုလုပ် [Click]
* မုန်တိုင်းသတိပေးချက်သတင်းစာမျက်နှာဖုံးတွင်ဖော်ပြ [Click]
* မြန်မာနှစ်ကူးမှာတိုက်ခတ်လာမည့်ဘီဂျလိမုန်တိုင်းနဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်ကကာကွယ်ဖို့ဘာသာရေးအစီအရင်ပြင်ဆင်နေကြ [Click]
* မုန်တိုင်းသတိပေးချက် [Click]
* မြန်မာနှစ်သစ်ကူးစစ်တွေကိုမုန်တိုင်းဖြတ်ဦးမည်၊ [Click]
Posted by Andaman Hero at 7:47 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၁၆ ရက် ၂၀၀၉ )
* အိန္ဒိယနိုင်‌ငံမှာရွေးကောက်ပွဲများစတင်ကျင်းပ [Click]
* ဘာလီကွန်‌ဖရင့်‌မှာရိုဟင်‌ဂျာကိစ္စဆွေးနွေးခဲ့ [Click]
* အိန္ဒိယရွေးကောက်ပွဲလူတချို့သေဆုံး [Click]
* သမ္မတအိုဘားမားမက္ကဆီကိုခရီးစဉ်နယ်စပ်လုံခြုံရေးနဲ့မူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေးဆွေးနွေးမည် [Click]
* နှုပ်ခမ်းမွေးညီနောင်၏ RFA အထူးအတာသက်ြန်ဖျော်ဖြေရေး [Click]
* ဝပြည်နယ်အခမ်းအနားသို့ဧည့်သည်သုံးထောင်နီးပါးရောက်ရှိ [Click]
* သင်္ကြန်တာဝန်ကျရဲအရာရှိကိုစစ်တပ်ကဝိုင်းရိုက် [Click]
* မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ဒေသမှာအ်ိမ်ခွန်များတိုးမြှင့်ကောက်ခံနေ [Click]
* လုပ်ကြံခံရသူကရင်ခေါင်းဆောင်၏သမီးစာအုပ်ရေးသားထုတ်ဝေ [Click]
* ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကို ၇၂ အတွင်းဝင်နိုင် [Click]
Posted by Andaman Hero at 7:58 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၁၄ ရက် ၂၀၀၉ )
* ထိုင်းဝန်‌ကြီးချုပ်ကအခြေအနေကိုထိန်းထားနိုင်‌ပြီလို့ ပြော [Click]
* ထိုင်းဆန္ဒပြမှုများပိုအကြမ်းဖက်လာ [Click]
* ဆိုမာလီပင်လယ်ဓားပြတိုက်ခိုက်မှုဟန့်တားဖို့သမ္မတအိုဘားမားကတိပြု [Click]
* မြန်မာ့ကျောက်မျက်ဒဏ်ခတ်မှုအပေါ်ညွှန်ကြားချက်အသစ်ထုတ်ပြန် [Click]
၉၀၇ ၊ ၉၀၆ နဲ့ ၉၀၁ တပ်ရင်းတွေကတပ်ခွဲတွေဟာကေအင်ယူတပ်ရင်း
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၁၃ ရက် ၂၀၀၉ )
* ထိုင်းဆန္ဒပြပွဲကိုစစ်‌တပ်‌ကစဖြိုခွင်း [Click]
* ထိုင်းဆန္ဒပြသူတွေစစ်တပ်စတင်နှိမ်နှင်း [Click]
* အမေရိကန်သဘောင်္ကပ္ပတိန်ပင်လယ်ဓါးပြလက်ကလွတ်မြောက် [Click]
* စစ်တပ်ရဲ့နှိမ်နှင်းဖြိုခွင်းမှုအပေါ်တုန့်ပြန်၊လမ်း၊တံတား၊ရထားလမ်းတွေပိတ်ဆို့ [Click]
* ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးအတွက် ၄ ရက်ကြာဆောင်ရွက်မယ်လို့အဘီဆစ်ပန်ကြား [Click]
* ဘန်ကောက်မှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာ [Click]
* လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရှီကာဂိုတလွှားသတင်းတိုထွာများ [Click]
* ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေမန်း၏သားကုမဏီကရွာသားများထံမှအဓမ္မမြေငှားခတောင်း [Click]
* နယ်စပ်မြို့ နယ်များမှာမူးယစ်ဆေးဝါးဗြောင်ရောင်းဝယ်သုံးစွဲနေကြ[Click]
* ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ ဖြိုးရေးအဇွဲ့ ဝင်တွေကိုအရေးယူဖို့ ရဲစခန်းကငြင်းဆို[Click]
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၁၂ ရက် ၂၀၀၉ )
* ထိုင်းနိုင်‌ငံ‌ရေးစိုးရိမ်‌ဖွယ်‌ရာ [Click]
* ပြန်ပေးဆွဲခံသင်္ဘော FBI စစ်ဆေး [Click]
* ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဘန်ကောက်နှင့်ခရိုင် ၅ ခုတွင်အပေါ်ကြေညာ [Click]
* ထိုင်းမှာဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေ [Click]
* ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်ကြဖို့အီစတာပွဲမှာပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးပန်ကြား [Click]
* သာကေတတွင်ဝမ်းးရောဂါဖြစ်ပွား [Click]
* မြန်မာစိတ်ကြွဆေးပြားများဒါကာအထိနေရာယူလာ [Click]
* Army 'responsible for ensuring democratic transition’ [Click]
၁၂ ဧပြီ ၊ ၂၀၀၉
သတင်း ။ ။ အန်ဒါမန်ဟီးရိုး
Posted by Andaman Hero at 8:01 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၁၁ ရက် ၂၀၀၉ )
* ဆိုမာလီပင်‌လယ်‌ဓါးပြရန်‌ [Click]
* အမေရိကန်သဘောင်္ကပ္ပတိန်ကိုပင်လယ်ဓါးမြတွေဖမ်းထားဆဲ [Click]
* အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံစတင်ကျင်းပ [Click]
* အီတလီငလျင်သေဆုံးသူများအတွက်နိုင်ငံတော်ဈာပနကျင်းပ [Click]
* ကော်လိုရာဒို၊ဒင်းဗားကမြန်မာတို့သင်္ကြန်ပွဲအစဉ်အလာမပျက်ဆင်နွှဲကြလိမ့်ဦးမည် [Click]
* မမြန်သောမြန်မာ့အင်တာနက်နှေးကွေးနေဆဲ [Click]
* Opposition group refuses to disarm despite talks[Click]
Posted by Andaman Hero at 5:37 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၁၀ ရက် ၂၀၀၉ )
* လယ်‌သမားမိသားစုကိုယ်‌ကိုယ့်‌ကိုအဆုံးစီရင်‌ [Click]
* မြန်မာနိုင်ငံကိုပိတ်ဆို့ အရေးယူရေးလောလောဆယ်ဂျပန်ကျင့်သုံးဖို့ မရှိ [Click]
Posted by Andaman Hero at 7:22 PM0comments
Monks in Sittwe abduct and kill Rohingya girl
Dear Sir Aye Chan,
I am an ethnic Rakhine like you. But I do not hate human being including Rohingya. Although you love Rakhine people very much, you hate Rohingya people most. Your book "Influx Virus" is one of the many evidents. You labelled human being as virus. I hope you are also finding medicine to kill all the viruses.
And the incident of rape and murder by monks in Sittwe is not strange for me. I believe the true monks will never commit such crime. If the incident is true, then the culprits must be some bad people wearing red cloth and eating and sleeping in monestary for free of charge. Or they must be agents of SPDC. SPDC will do every thing to create conflict between two peaceful communities. The cause of split in KNU was alsoaMonk.
So please do not protect all those who wear red cloth and eat and sleep in monestry. Instead we should sypmathise on the victim and punish those beasts who gave our monks and monestry bad name.
Budhism isapeaceful religion and our monks are the most sacrificed one among the human being.
Khaing Hla Phru
* ညူးကလီးယားအစီအစဉ်‌ဆက်‌လုပ်‌ဖို့အီရန်‌စိတ်‌ပိုင်းဖြတ်ထား‌ [Click]
* ထိုင်းနိုင်ငံလုပ်တရားမဝင်တင်သွင်းဆေးများသတိပေးခံရ‌ [Click]
* အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ရေးအာဆီယံသဘောတူ [Click]
* ရုပ်သေးအစိုးရသစ်အတွက်အရာရှိအသစ်မွေးဖို့ စစ်အစိုးရကြိုးပမ်းနေ [Click]
* သင်္ကြန်ရက်နီးရန်ကုန်မှာခရီးသွားလာရေးပိုခက် [Click]
* ပဲလိမ်ကုန်သည်ပိုင်ပစ္စည်းများလျှို့ဝှက်လေလံပွဲကျင်းပ [Click]
* ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်အမြန်လမ်းရဲ့နိဒါန်း၊ဇာတ်လမ်းမှတ်တမ်းတင်စမ်း [Click]
* မန္တလေးရတနာပုံသက်တမ်းနှစ် (၁၅၀)ပြည့် [Click]
* ဘန်ကောက်မြို့လယ်ပို့ဆောင်ရေးပြတ်တောက်Victory Monument အ၀ိုင်းကိုဆန္ဒပြသူတွေစီး [Click]
အပင်အောက်မှာတော့၊ပိုးအိတို့ ၊မိစန်းတို့ ကအငမ်းမရ
အန်ဒါမန်ဟီးရိုး ဧပြီလ ၁၀ ၊ ၂၀၀၉
Posted by Andaman Hero at 12:41 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၉ ရက် ၂၀၀၉ )
* ကုလသမဂ္ဂဆိုင်‌ရာမြန်မာသံအမတ်သစ်‌ခန့်‌အပ်‌ [Click]
* အမေရိကန်သင်္ဘောပင်လယ်ဓါးမြလက်ကပြန်ရ [Click]
* အာဆီယံဆွေးနွေးပွဲကုန်သွယ်ရေးဦးစားပေးဖို့တရုတ်တိုက်တွန်း [Click]
* အင်ဒိုနှီးရှားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပ [Click]
* KNUကို တဖက်‌ကဆွေးနွေးပြီးတဖက်‌က‌နေတိုက်‌ခိုက်‌ [Click]
* အင်ဒိုနီးရှားရွေးကောက်ပွဲသမ္မတဆူဆီလိုပါတီရှေ့ကပြေး [Click]
* NLD ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအစည်းအဝေးဧပြီလကုန်မှာကျင်းပမည် [Click]
* လွဲမှားစွာတရားစီရင်ပုံလူ့ အခွင့်အရေးကော်မရှင်ထောက်ပြ [Click]
* မြစ်ကြီးနားထောင်တွင်ဇာဂနာနှင့်ထောင်ဝင်စာတွေ့ ခွင့်မရပဲငွေလိမ်ခံရ [Click]
* စစ်အစိုးရနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးယူမယူကရင်နီတပ်ဖွဲ့ ကိုထိုင်းစစ်တပ်မေးမြန်း [Click]
* စစ်အစိုးရ၏စွပ်စွဲချက်ရှေ့ နောက်မညီကြောင်းဝေဖန် [Click]
* ဆေးဝါးခက်ခဲ၍အဆုတ်ရောဂါဆေးယဉ်သူအများအပြားရှိနေ [Click]
Posted by Andaman Hero at 1:05 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၈ ရက် ၂၀၀၉ )
* ထိုင်းအစိုးကိုဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်စွပ်စွဲ [Click]
* ထောက်လှမ်းရေးဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဝင်းသမီးရန်ကုန်မှာအသတ်ခံရ [Click]
* အစိုးရဖြုတ်ချရေးဘန်ကောက်ဆန္ဒပြပွဲကြီးခေတ်ပြိုင်သတင်းဘလော့ [Click]
* လှိုင်သာယာ Daiko Myanmar အအေးခန်းစက်ရုံလုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်း [Click]
* ပီရူးသမတ‌ဟောင်းထောင်‌ဒဏ်‌နှစ်ရှည်ကျ [Click]
* သမ္မတအိုဘားမားအီရတ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံ [Click]
* Burma VJ မှတ်တမ်းတင်ဗွီဒီယိုအမေရိကန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဆု ၃ ဆုရရှိ [Click]
* ထိုင်းဆန္ဒပြမှုအရှိန်မြင့်လာ [Click]
* NLD လူငယ်ဖွဲ့ စည်းရေးအဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်နေ [Click]
* ကရင်နီလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ကိုထိုင်းစစ်တပ်ကဖိအားပေး [Click]
* အဓမ္မအလုပ်ခိုင်းစေရာမလိုက်လျှင်ဒဏ်ငွေတပ် [Click]
* စစ်တပ်ကရိုက်သဖြင့်အတွင်းလူနာအဖြစ်ဆေးရုံတက်ရ [Click]
* ဂျပန်ရှိမင်္ဂလာဒိုးအဖွဲ့၏သင်္ကြန်သံချပ်များဖြန့်ချိ [Click]
* ထိုက်သင့်ပြစ်ဒဏ်မဟုတ်သဖြင့်ဘလော့ဂါ ၂ ဦးကိုလွှတ်ပေးရန် RSF တောင်းဆို [Click]
* အန်အယ်ဒီကအထူးကြေညာချက် ၁၈ ပါအချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်နေ [Click]
Posted by Andaman Hero at 10:45 AM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၇ ရက် ၂၀၀၉ )
* ထိုင်းအစိုးရနဲ့‌ကရင်‌အမျိုးသားအစည်းအရုံး‌ဆွေနွေး [Click]
* ထိုင်းဆန္ဒပြသူတွေဝန်ကြီးချုပ်အဘီဆစ်ကားကိုတိုက်ခိုက် [Click]
* စစ်အစိုးရအပေါ်စီးပွားရေးပြစ်ဒါဏ်များရုတ်သိမ်းပေးရေးသတင်းစာရှင်းပွဲပြုလုပ် [Click]
* ကရင်အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးအရာရှိများနှင့်တွေ့ ဆုံ [Click]
* လူထုဒေါ်အမာကွယ်လွန်းခြင်းတနှစ်ပြည့်အထိန်းအမှတ်ပြုလုပ် [Click]
* လမ်းတံတားကြေးများ၍ကားသမားများအခက်အခဲဖြစ် [Click]
* မြစ်ကြီးနားထောင်ကလူရွှင်တော်ဇာဂနာထောင်ဝင်စာပိတ်ခံရ [Click]
* ကော့သောင်းမြို့၌လူမှောင်ခိုပွဲစားများဘုန်းကြီးကျောင်းတချို့နှင့်ပြဿနာဖြစ် [Click]
* သိန်းနှစ်ထောင်ကျော်တန်ဖိုးရှိတရုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ကားများအသိမ်းခံရ [Click]
* ဆယ်တန်းစာမေးပွဲအဖြေလွှာများစတင်ဖျက်နေဇွန်တွင်အောင်စာရင်းထွက်ပေးနိုင်သည်ဟုသိရ [Click]
* တပ်ဆင်၏နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲထိုင်းနိုင်ငံရေးကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါ့မလား [Click]
* ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းထပ်ဆင်ကိုဖမ်းပေးသူထိုင်းဘတ်ငွေ(၁)သန်းပေးမည် [Click]
* လူ့အခွင့်အရေးလေးစားရန် ၈၈ အဖွဲ့တောင်းဆို [Click]
* အန္တရာယ်ရှိသောသူငယ်နာဆေးများကိုနယ်ဘက်တွင်ဆက်လက်သုံးစွဲနေ [Click]
* လူကြမ်းတွေနားရင်ကြိုက်လား [Click]
* ယခုနှစ်သင်္ကြန်စာအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခွဖော်ပြ [Click]
* သမ္မတအိုဘားမားမွတ်စလင်ကမ္ဘာနှင့်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးပြန်ကောင်းမွန်စေလို [Click]
* အီတလီငလျင်အသက်မသေကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေနေဆဲ [Click]
* အီတလီငလျင်မှာသေဆုံးသူ ၁၅၀ ‌ကျော်ပြီ [Click]
* မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ ဝင် ၅ ဦးအဖမ်းခံရ [Click]
Posted by Andaman Hero at 8:13 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၆ ရက် ၂၀၀၉ )
ကေအင်ယူတပ်မဟာ၆နယ်မြေအထဲက၊ထိုင်း၊မြန်မာနယ်စပ်မှာနောက်ဆုံးတခုပဲကျန်တော့တဲ့၊တပ်ရင်း၂၀၁ရဲ့ဝေါ်လေခီးစခန်းကို တိုက်ခိုက်၊သိမ်းယူဖို့အတွက်နအဖနဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်ဒီကေဘီအေတပ်တွေက၊ဝေါ်လေခီးစခန်းကိုဒီနေ့ မနက်အစောပိုင်းမှာချဉ်းကပ် လာပါတယ်။
ရွာသားတွေသတိနဲ့နေကြဖို့နဲ့မော်တာကျည်တွေမတော်တဆထိုင်းဖက်ကိုကျလာရင်ဗုံးခိုကျင်းတွေထဲဝင်နေဖို့၊တိုက်ပွဲကသိပ်ပြီး ပြင်ထန်ရင်၊နယ်စပ်နဲ့အလှမ်းဝေးတဲ့တခြားထိုင်းရွာတွေကိုခေတ္တပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့ အတွက်ရွာသားတွေကိုသတိပေးနှိုးဆော်ထား ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံနဲ့ သတင်း။ ။ အင်ဒါမန်ဟီးရိုး
* မြောက်ကိုရီးယားဒုံးပျံအရေးလုံခြုံရေးကောင်စီမဆုံးဖြတ်နိုင်သေး [Click]
* အမေရိကန်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းပိုတိုးလာနိုင် [Click]
* ပြည်‌‌ထောင်‌စုမြန်မာနိုင်ငံညွန့် ပေါင်းအစိုးရအရှေ့ တီမောခရီး [Click]
* ဘုရားဖူးခရီးသည်တင်ကားမှောက၂၄ ဦးသေဆုံး [Click]
* ကေအင်ယူခေါင်းဆောင်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဌာနနှင့်တွေ့[Click]
* ဖြူးမြို့မှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ဒေသခံပြည်သူများစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ် [Click]
* ဗဟန်းရွှေဂုံတိုင်ယာဉ်ထိန်းရဲကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့်ငွေကြေးကောက်ခံ [Click]
* ကော့သောင်းယုဇနဆီအုန်းစိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်းမှအဓမ္မခိုင်းစေမှုများ [Click]
* အိုဘားမားနှင့်ဂျိန်းစဘွန်းကား [Click]
Posted by Andaman Hero at 2:40 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၅ ရက် ၂၀၀၉ )
နအဖခြေမြန်တပ်ရင်း ၃၅၆ နှင့်ဒီကေဘီအေ ၉၀၇ တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့၊ကေအင်ယူတပ်ရင်း ၂၀၁ လက်အောက်ခံတပ်ခွဲတစ်ရဲ့ရှေ့ တန်းစခန်းကိုဒီနေ့ မနက် ၇ နာရီခွဲလောက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
နအဖတပ်ကမော်တာတွေနဲ့ ဒလစပ်ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်မနက် ၉ နာရီခွဲလောက်မှာကေအင်ယူတပ်ခွဲရုံးကသူ
တို့ စခန်းကိုစွန့် ပြီး၊သူ့ ရဲ့မိခင်တပ်ရင်း ၂၀၁ ရှိရာဝေါလေခီးဖက်ကိုထွက်သွားတယ်လို့ ထိုင်းနယ်စပ်လုံခြုံ ရေးအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာနအဖနဲ့ ဒီကေဘီအေတပ်တွေက၊ကေအင်ယူတပ်ခွဲရုံးရဲ့တဲ ၃ လုံးနဲ့ စပါးကြီတလုံးကိုမီးရှို့ လိုက်
လုံခြုံရေးကိုဖြည့်တင်းထားတယ်လို့ ထိုင်းရှေ့ တန်းတပ်မှူးတယောက်ကပြောပါတယ်။
ထိုင်းနယ်စပ်လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေကတော့၊နအဖနဲ့ ဒီကေဘီအေတပ်တွေဟာ၊ကေအင်ယူတပ်ရင်း ၂၀၁ ဌာန
ချုပ်ဝေါလေခီးစခန်းကိုဒီနေ့ ညနေဒါမှမဟုတ်ရင်မနက်ဖြန်ဝေလီဝေလင်းမှာဝင်တိုက်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအခြေနေကြောင့်နယ်စပ်နဲ့ ကပ်နေတဲ့၊တောင်ယာတွေကိုထိုင်းတောင်ယာသမားတွေကခေတ္တမသွားပဲနေကြဖို့ထိုင်းစစ်တပ်ကထိုင်းရွာသားတွေကိုနှိုးဆော်ထားပါတယ်။
သတင်းနဲ့ ဓါတ်ပုံ။ ။ အင်ဒါမန်ဟီးရိုး
* နေတိုးညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက် [Click]
* သမ္မတအိုဘားမားရဲ့အာဖဂန်ဗျူဟာနေတိုးအဖွဲ့ထောက်ခံ [Click]
* အတားအဆီးတွေကြားအဲန်အယ်လ်ဒီလက်မှတ်ဆက်စုဆောင်း [Click]
* ဖိုးလပြည့်အင်းလျားလမ်းတွင်ရေပက်မည် [Click]
* နာဂစ်အကူအညီလိုအပ်တာထက်လေဵာ့နည်းနေ [Click]
* ဗိုလ်ချုပ်လွန်းမောင် ၂ဝ၁ဝ အတွက်စည်းရုံးရေးဆင်း [Click]
* ကချင်ပြည်နယ်မှာရာဇဝတ်မှုများပြား [Click]
* ဗိုလ်ချုပ်မြသားငယ်လက်နက်ချတာ KNU အတွက်မထိခိုက် [Click]
* မြန်မာနိုင်ငံမှာရောဂါသုံးမျိုးတိုက်ဖျက်ဖို့ အကူအညီအရေးတကြီးလိုအပ်နေ [Click]
* အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုထောင်ဝင်စာသွားတွေ့ ခွင့်မရ [Click]
* ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံမိသားစုဆရာဝန်ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းသွားရောက် [Click]
* အပြင်သတင်းမေးတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားထောင်ဝင်စာအပိတ်ခံရ [Click]
* ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှာရခိုင်တိုင်းရင်းသူတဦးလွှတ်တော်အမတ်အရွေးခံရ [Click]
Posted by Andaman Hero at 3:20 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၄ ရက် ၂၀၀၉ )
* မြန်မာအစိုးရကအပြုသဘောတုံ့ ပြန်မှပိတ်ဆို့ မှုရုတ်သိမ်းသင့် [Click]
* နေတိုးထောက်ခံမှုရဖို့သမ္မတအိုဘားမားကြိုးပမ်း [Click]
* မြန်မာကိုဆက်ပိတ်ဆို့ရေးအမေရိကန်အမတ်များတိုက်တွန်း [Click]
* နယူးယောက်ခ်ပစ်ခတ်မှု ၁၄ ဦးသေဆုံး [Click]
Posted by Andaman Hero at 1:40 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၃ ရက် ၂၀၀၉ )
* ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဝန်ကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းငွေပေးပြီးမဲဆွယ် [Click]
* မြန်မာ-တရုတ်စွမ်းအင်ပိုက်လိုင်းမြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းကိုဖြတ်သန်းမည် [Click]
* နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုရပ်ဝေးထောင်များသို့ ဆက်လက်ပြောင်းရွှေ့[Click]
* ထိုင်း-ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်တိုက်ပွဲဖြစ် [Click]
* ထိုင်းစက်ရုံပိတ်ပစ်၍မြန်မာ ၂၀၀ကျော်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ် [Click]
* G 20 ထိပ်‌သီးညီလာခံပြီးစီး [Click]
* ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးပြန်လည်ဦးမော့ရေး G20 မှာဆွေးနွေး [Click]
* G-20 ညီလာခံပြီးဆုံး၊ဆင်းရဲနိုင်ငံများအကူအညီပိုရမည် [Click]
* ကေအင်ယူခွဲထွက်အဖွဲ့ အားလုံကို ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်းလက်နက်မဖြုတ် [Click]
* လေဘေးသင့်ပြည်သူများမိုးကျခါနီးနေစရာအတွက်စိုးရိမ် [Click]
* ရန်ကုန်မြို့လယ်မှနှစ်လောင်းပြိုင်လူသတ်မှု [Click]
* လူထုနှင့်အန်အယ်လ်ဒီအခြေအနေဦးဝင်းတင်နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း [Click]
* ဦးသန့်နဲ့ ဘာသာရေး [Click]
* မလေးရှားကမြန်မာလက်ဖက်ကိုစစ်ဆေးနေပြီ [Click]
* အင်တာနက်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ရန်ရက်အကန့်အသတ်မရှိကြာမည် [Click]
* သင်္ကြန်တွင်အဆိုတော်များဝတ်စားဆင်ယင်မှုကန့်သတ်ခံရ [Click]
* နေရပ်ပြန်ခွင့်ရရေးမလေးရှားရောက်မြန်မာများဆန္ဒပြ [Click]
* နာဂစ်ဒုက္ခသည်အတွက်အမေရိကန်ကဆန်လှူ [Click]
* ကုလအရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ဖို့ဂျပန်ပြင်ဆင် [Click]
* မီးရထားရုံပိုင်ငွေတောင်းပြီးမတောင်းဘူးဟုငြင်း [Click]
* သူပုန်များသာမြေမြှုပ်မိုင်းသုံးဟုအစိုးရစွပ်စွဲ [Click]
* Insurgents to Blame for Landmine Casualties: Junta [Click]
* Burma urged to stop landmine use [Click]
* Burma Internet Slowdown Continues [Click]
Posted by Andaman Hero at 12:19 PM0comments
ယနေ့ သတင်းများ ( ဧပြီလ ၂ ရက် ၂၀၀၉ )
* မြန်မာ့အရေး အမေရိကန်ဗျူဟာ အာရှနဲ့တပြေးညီချမှတ်လို [Click]
* ဆိုးဆေးပါ မြန်မာလက်ဖက် မလေးရှားပိတ်ပင် [Click]
* G 20 ထိပ်‌သီး ညီလာခံ [Click]
* G-20 ညီလာခံမှာ စီးပွားရေး ဘုံရပ်တည်ချက် ရအောင် ရှာမည် [Click]
* လန်ဒန်ရောက်အမေရိကန်သမတကြီးအတွက်အထူလုံခြုံရေး [Click]
* ဆောင်းဦးလှိုင်စင်ကာပူသင်္ကြန်သွားရေးမသေချာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးမပေး [Click]
* ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်အမှုမေတ္တာရပ်ခံချက်ထပ်တင်မည် [Click]
* လမ်းတံတားလေလံကြေးအလွန်မြင့်ကုန်ဈေးနှုန်းမကျနိုင် [Click]
* မြန်မာ့အရေး ၆ ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးရန်အမေရိကန်အဆိုပြု [Click]
* အင်တာနက်မြန်ဆန်နိုင်မည့်ရက်ထပ်မံရွှေ့ဆိုင်း [Click]
* သင်္ကြန်ကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးနှင့်ဆိုင်သည့်အ၀တ်များမ၀တ်ရ [Click]
* သာသနာ့နယ်မြေအနီးရှိဟိုတယ်ဖယ်ရှားရန်လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆို [Click]
* အရိုက်ခံရသူ ဆရာ နယ်ပြောင်းရ [Click]
* ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်းစင်းလုံးငှားလေယာဉ်လိုင်းထောင်ရန်ပြင် [Click]
* မြန်မာ့အရေးအတွက်အာရှနိုင်ငံများနှင့်ပူးပေါင်းချဉ်းကပ်မည်ဟုအမေရိကန်ပြော [Click]
* မြန်မာ့စီးပွားရေးတိုးတက်ဟုဝန်ကြီးချုပ်ပြော [Click]
* နိုင်ငံရေးအကဵဉ်းသားလွှတ်ပေးရေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတိုက်တွန်း [Click]
* မြေမြှုပ်မိုင်းကင်းရှင်းရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ [Click]
* ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကုန်သည်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်စည်းမျဉ်းများပြင်ဆင် [Click]
* ထောင်ဝင်စာတွေ့ ချိန်ပိုပေးဖို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုများလိုလား [Click]
* Change is needed from the outside [Click]
Posted by Andaman Hero at 4:14 PM0comments